अनामणिका चम्ल्याहा बाल कृति::KhojOnline.com
कुराकानीमा साह्रै नरम, लगनशीलताका पक्षमा कछुवा जस्तो बिस्तारै अघि बढिरहने नजानिँदो साहित्यिक व्यक्तित्वको नाम हो – रत्नप्रसाद अनामणि श्रेष्ठ । पुख्र्यौली घर काभ्रेपलाञ्चोकको नालालाई मनबन्धकीमा राखेर उहाँ बसिरहनु भएको छ काठमाडौँस्थित गोङ््गबुँको टोखा नगरपालिकामा ।
सडकको धुलो र कसिङ््गरले ढाकिराखेका साना ठुला सबै आकार प्रकारका किताबका छेडोबाट यसो भित्र नियाल्दा उहाँ केही न केही गरिरहेको भेटिनुहुन्छ । एउटा सामान्यभन्दा सामान्य जस्तो लाग्ने यो पसलरूपी कोठा उहाँको सिर्जनाको उत्पत्ति थलो हो । यही थलोमा उहाँ कहिले कामसँग सम्बन्धित मानिसहरूसँगको वार्ता र कहिले कम्प्युटरको स्क्रीनमा मुन्टो ठड्याएर आँखा तन्काइरहेको अवस्थामा भेटिनुहुन्छ । बाहिरी मानिसहरूसँगको छलफल, पसलको रूप रङ र अरू केही कुराको अवलोकनबाट उहाँ विविध पेशामा आबद्ध रहनु भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, यस समीक्षात्मक आलेखमा उहाँको साहित्यिक व्यक्तित्वअन्तर्गतको एउटा सानो पाटोमा मात्र चियोचर्चो र खोजीनिती गरिने छ, त्यसमा पनि बाल साहित्यका विषयमा उहाँले हालै प्रकाशनमा ल्याउनु भएका चम्ल्याहा कृतिका विषयमा कुराकानी गरेर ।
गर्भाधान कहिले र कसरी भयो थाहा छैन । तर, २०७६ असारको एउटै महिनामा चार वटा अर्थात्् चम्ल्याहा बालोपयोगी ससाना कृतिलाई जन्म दिनुभएको छ – यिनै रत्नप्रसाद अनामणि श्रेष्ठले । जसरी जुम्ल्याहा, तिम्ल्याहा, चम्ल्याहा बालबच्चाको एक अर्कामा फरक फरक किसिमको बानी बेहोरा र स्वभाव हुन्छ त्यस्तै एउटै महिनामा एकसाथ जन्मिएका यी चम्ल्याहा कृति पनि फरक फरक प्रकृति र स्वादका छन्् । कथाबस्तु, घटनाक्रम, दिन खोजिएको सन्देश र सामग्रीको प्रस्तुति फरक फरक किसिमको छ । चम्ल्याहा सबै कृति बत्तीस बत्तीस पृष्ठमा समेटिएका छन्् भने शुभकामना मन्तव्य लेखन पनि सबैमा पछिल्लो समयका विद्वान्् लेखक एवं नेपाल बाल साहित्य समाजका अध्यक्ष डा. शैलेन्दुप्रकाश नेपालको रहेको छ । चम्ल्याहा यी चारै कृति गौरी पब्लिक रिलेशन एन पब्लिकेशन नामक संस्थाले प्रकाशनमा ल्याएको छ ।
प्रकाशनमा आएका यी चम्ल्याहा कृतिमा पहिलो छ – बाल आत्मकथाका रूपमा लेखिएको ‘कथा गोविन्दको ।’ दोस्रो कृति छ – काभे्रपलाञ्चोकको नालाका विषयमा केन्द्रित रही ‘उग्रचण्डी नाला’ को नाम दिएर लेखिएको ऐतिहासिक बाल कथा सङ््ग्रह । यसै क्रमको तेस्रो कृति छ – ‘अबको सोच सकारात्मक सोच’ नामक कृति । यसरी नै चौथो तथा अन्तिम कृति छ – ‘ब्ल्याक होल’ नामक विज्ञान बाल एकाङ््की नाटक सङ््ग्रह । यसरी यी चार कृति अर्थात्् एकैसाथ जन्मेका चम्ल्याहा कृति एक अर्कामा नितान्त फरक छन्् । यी सबै कृतिलाई छोटकरीमै भए पनि अलग अलग रूपमा यहाँ चर्चा गर्नु सर्वथा सान्दर्भिक देखिन्छ ।
१. ‘कथा गोविन्दको’
यो सत्य कथामा आधारित बाल कथा हो । यो कथा जसको विषयमा लेखिएको छ उसैसँग वार्ता गरेर लेखिएको हो । तर पनि यो अन्तर्वार्ता नभएर कथा बनेको छ । अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट अन्तर्वार्ताकारको कथा यसमा कोट्ट्याइएको छ । लेखकको पसल अगाडिबाट सधैँ सडक बालकको हैसियतमा यता र उता भौँतारिइरहने केटोलाई फकाई फुल्याई साथमा लिएर कथाकारले यो कथा बुनेका छन्् । त्यसैले यो कथा काल्पनिक नभएर सत्यतामा आधारित छ । यस कथाको सत्यता बालक स्वयंको अभिव्यक्तिमा निर्भर रहेको छ ।
अन्तर्वार्ता लिइएको त्यस बालकको नाम हो – गोविन्द तामाङ । आमा बुवाको अतिरिक्त एउटा दाजु, एउटी भाउजु, भतिजा–भतिजी र एउटी दिदी समेतको धनी ऊ कसरी यो अवस्थामा आइपुग्यो भन्ने जीवन्त कथा यसमा छ । ज्यामी काम गर्ने र त्यसबाट आर्जित आय पनि कुलतमा खर्चिने आमा बाबुको सानैमा मृत्यु भएपछि गोविन्दको दुःखका दिन सुरु भएको तथ्यलाई उद््घाटन गर्दै दाजु भाउजुको माया पनि भतिजा–भतिजीको जन्मपछि न्यून हुँदै गएको कथावस्तु यसले समेटेको छ । एउटी दिदी त्यो पनि निम्न स्तरको ज्यामी काम गर्दागर्दै विवाह बन्धनमा बाँधिएकी, गोविन्द होटल साहुकोमा काम गर्दागर्दै ६ कक्षासम्म जसोतसो गरेर पढेको, साहुले होटेल बेचेपछि साहुसँगै घर लैजान खोज्दा नमानेपछिका दिनबाट गोविन्दको पछिल्लो दुःखपूर्ण जिन्दगीको सुरुआत भएको कथा निकै मार्मिक ढङ््गमा यसमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
चितवनमा जन्मिएको केटो काठमाडौँ आएर कसरी बसपार्कवासी भयो, के कस्ता हन्डर उसले बेहोर्नु प¥योदेखि जोसुकैको बसपार्कको जिन्दगी र त्यहाँको रहनसहनका विषयमा यसले सजीव चित्र खिचेको छ । यसरी हेर्दा यो कथा गोविन्दको मात्र नभएर अरू थुपै्र गोविन्दको भएको भान हुन्छ ।
कथामा प्रस्ट रूपमा व्यक्त नभए पनि लेखकले अप्रत्यक्ष रूपमा यस कथाका माध्यमबाट गरिब र निम्नवर्गीय समाजको कुरा उठाएर सत्तामा पुग्ने सरकारका सामु ठुलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन्् । पन्ध्र वर्षीय बालक गोविन्दको यो कथा वास्तवमै निकै मार्मिक छ । दर्दनाक छ । दुःखपूर्ण छ । बालकहरूले यस कथालाई निकै सुरुचिपूर्ण ढङ््गबाट अध्ययन गर्ने कुरामा शङ््का गरिरहनु पर्दैन । सरल भाषामा लेखिएको यो कृति बालकहरूका लागि पक्कै पठनीय कृतिभित्र पर्छ ।
२. ‘उग्रचण्डी नाला’
यस कृतिमा काभे्रपलाञ्चोकको नालालाई केन्द्रविन्दु बनाएर नाला र यसको सेरोफेरोका चार ऐतिहासिक कथालाई समेटिएको छ । त्यसमध्येको पहिलो कथा ‘हिदुम्ब राक्षस र नाला महालक्ष्मी जात्रा’ को छ । यसमा राक्षसले त्यस क्षेत्रमा दिएको दुःख र महालक्ष्मीले नालावासीको उद्धारका लागि चालेको कदमका विषयमा सविस्तार कथात्मक वर्णन गरिएको छ । यो वास्तवमा नाला महालक्ष्मीको जात्राको उत्पत्ति र निरन्तरताको मिठो कथा हो । नालावासीहरू नियमित रूपमा राक्षसको आहारा बन्न जाने क्रममा एक दिन एक केटीको रूपमा महालक्ष्मी स्वयं गएकी र राक्षसलाई युक्तिपूर्वक इनारमा खसाएर ढुङ््गाले छोपेर राक्षसको नास गरी सधैँका लागि नालावासीको उद्धार गरेको रोचक कथा बालकहरूका लागि पनि उत्तिकै पठनीय हुने आकलन गर्न सकिन्छ ।
यसभित्रको अर्को कथा हो – ‘ज्ञानसिंह आचाजूको कथा ।’ यसमा नाला छेउबाट बग्ने नन्यमाता र पुण्यमाता खोला, त्यसमा बनेका दहमा पौडी खेल्ने कुरा, पौडी खेल्दा ध्यान दिन नसके ज्ञानसिंह आचाजू (पहिला प्रसिद्ध तान्त्रिक मानिस नै भए पनि पछि अजिङ््गरको रूप धारण गरेर फेरि मानिस हुने क्रममा पूर्वनिर्देशित सूत्र पालन नहुँदा भूत नै भएर रहनु परेको) जस्तो हुन सक्ने विषयवस्तुलाई कथाको रूपमा उतारिएको छ । बच्चाहरूका लागि यो कथा निकै रोचक छ । कथाका माध्यमबाट कथाकारले बच्चाहरूलाई जथाभावी पौडी खेल्ने काममा सतर्क हुन औँल्याएका छन्् ।
‘उग्रचण्डी नाला’ कृतिभित्रको तेस्रो तथा यस सङ््ग्रहको प्रमुख कथा हो – ‘उग्रचण्डी नाला भगवतीको उत्पत्ति’ को कथा । यी भगवतीलाई नेपालमा रहेका चार प्रसिद्ध भगवतीमध्ये एक हुन्् भनी चिनाइएको यस कथामा उग्रचण्डी नाला भगवतीको उत्पत्तिको रोचक कथा समेटिएको छ । सत्तामा रहेका शासकले पारम्परिक धर्म संस्कृतिलाई बेवास्ता गर्दा के कस्ता आपद्् विपद्् आइलाग्छ भन्ने कुराको पनि उदाहरण बनेको छ यो कथा । नेपालको सन्दर्भमा यतिखेरका शासकका लागि निकै मननीय र सान्दर्भिक हुन सक्छ यो कथा । पछि त्यस्ता शासकको आँखा खुलेर धर्म, संस्कृतिलाई पछ्याएको मिठो प्रसङ््ग पनि यसमा समेटिएको छ । अष्टमी व्रतमा निमग्न नागिरीपुर (नाला) बासीलाई स्वर्गका राजा इन्द्रले भेष बदलेर आई विध्वंस गर्न खोज्दा राजालाई धर्मतर्पm आकृष्ट गराउने स्वयं चन्द्रावतीले उग्रचण्डी भगवतीको रूप धारण गरी नालावासीको रक्षा गरेको जस्ता मिठा प्रसङ््ग कथामा वर्णित छन्् ।
यस कृतिभित्रको चौथो कथा ‘फेसबुक र स्वस्थानी’ रहेको छ । यो वार्ता शैलीमा लेखिएको छ । लेखक स्वयंले आपूmलाई यहाँ पारसमणि नाम दिएर शिक्षकका रूपमा उभ्याएका छन्् । पछिल्लो समयमा बाल वृद्ध सबैको प्यारो बनिरहेको फेसबुकको प्रसङ््ग यहाँ उल्लेख छ । पारसमणिले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा ‘मेरो नाला’ पेज राखेको र त्यो स्कुले बच्चाहरूले रुचाएका प्रसङ््गबाट कथा सुरु हुन्छ । कथा अघि बढ््दै जाँदा फेसबुकका फाइदा बेफाइदाका चर्चा पनि यहाँ हुन्छन्् । झुठा नाममा एकाउन्ट खोल्ने कुरा पनि यहाँ आउँछन््, जुन कुरा राम्रो होइन भन्ने सन्देश यहाँ दिइएको छ । यसै कथाभित्र फेरि स्वस्थानी कथाको सानो प्रसङ््गलाई पनि जोडिएको छ । तुलनात्मक रूपमा यसरी जोडिएको स्वस्थानी कथाको कथानक पक्ष केही कमजोर देखिन्छ । तथापि कथा जानकारीमूलक नै छ ।
३. अबको सोच सकारात्मक सोच
चम्ल्याहामध्येको उनको तेस्रो कृति हो – ‘अवको सोच सकारात्मक सोच ।’ पुस्तकीय शीर्षकबाट नै यस पुस्तकमा के कस्ता विषयवस्तु समेटिएका छन्् भन्ने अनुमान वयस्क पाठकले लगाए तापनि बाल पाठकले त्यस कुराको भेउ झ्वाट्टै पाउन सक्तैनन्् । झ्वाट्ट हेर्दा यो कृति बाल केन्द्रित मात्र नभएर वयस्क केन्द्रित पनि हो भन्दा फरक परोइन । सकारात्मक सोचका विषयमा प्रश्नात्मक जिज्ञासा राखेर लेखकले भन्न खोजेका विषय वस्तुलाई अगाडि बढाएका छन्् ।
हामी सबैको बानी केटाकेटीलाई तिमी भनेर सम्बोधन गर्नेमा पोख्त छ । यस कृतिमा लेखकले सबैलाई तपाईं भनेर सम्बोधन गरिरहँदा कता कता मनले असजिलो माने जस्तो आभास हुन्छ । कुरो राम्रो भए पनि व्यवहारमा त्यति अगाडि नबढेकाले यो स्थिति उत्पन्न भएको हुन सक्छ । सकारात्मक योजना बनाउने कुरादेखि लिएर त्यसको कार्यान्वयनसम्मका कुरा यसमा समेटिएका छन्् । जुनसुकै विषयवस्तुलाई सकारात्मक रूपमा हेर्ने बानीले परिणाम पनि सकारात्मक हुने कुरामा लेखक विश्वस्त देखिन्छन्् । उनको यस विश्वासलाई आम पाठकले ताली बजाएर स्वागत गर्न उपयुक्त हुन्छ । उनको अन्तिम आग्रह हामी जोसुकैसँग भएको नकारात्मक सोचलाई आजै पशुपति आर्यघाटमा लगेर जलाउने र सकारात्मकताको बीजारोपण गर्नुपर्ने कुरामा केन्द्रित छ । यस अर्थमा कृतिको भाव मननीय छ ।
४. ब्ल्याक होल
रत्नप्रसाद अनामणि श्रेष्ठको चम्ल्याहामध्येको अन्तिम कृति हो – ‘ब्ल्याक होल ।’ यसमा भएका ब्ल्याक होल सम्बन्धी विषयवस्तुलाई नाटकीय शैलीमा प्रस्तुत गरिएकाले उनले यस कृतिलाई विज्ञान बाल एकाङ््की नाटक भन्न रुचाएका छन्् । उनको रुचि अनुसार नै कृतिका विषयवस्तु अघि बढेको छ । यसभित्र ‘ब्ल्याक होल, पानी घट्ट र डल्फिन’ गरी तिन वटा बाल एकाङ््की छन्् । समेटिएका एकाङ््कीमध्ये ब्ल्याक होल पूर्ण वैज्ञानिक विषयवस्तु हो भने पानी घट्ट आंशिक वैज्ञानिक विषयवस्तु हो । डल्फिन एकाङ््कीलाई अरूको तुलनामा विज्ञान सामग्रीको कोटीमा राखिहाल्न केही अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ ।
ब्ल्याक होल साना भाइबहिनीहरूका लागि निकै जिज्ञासामूलक सामग्रीको रूपमा देखा पर्छ । यस्तै पानी घट्टको प्रचलन मासिदै गएको वर्तमान अवस्थामा त्यो पनि बाल बालिकाका लागि अनौठो सामग्री बन्न सक्छ । यस्तै डल्फिन पनि बालबालिकाहरूका लागि अनौठो कौतूहल पैदा गर्ने कथाका रूपमा प्रस्तुत भएको पाइन्छ । समग्रमा यसमा समेटिएका सबै एकाङ््की बालज्ञानका लागि उपयोगी देखिन्छन्् ।
कथाकार÷लेखकका विषयमा सानो प्रसङ््ग कोट्ट्याइए पनि यो समीक्षात्मक आलेख यस कृतिलाई चिनारी गराउने उद्देश्यले लेखिएको हो । कृतिका विषयवस्तुले समेटेका कुरा छोटकरी रूपमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा सबै विषयवस्तु पक्कै पनि यसभित्र समेटिएको छैन । चम्ल्याहा कृतिका सबै विषयवस्तु यहाँ अट््ने कुरा पनि भएन ।
साना बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर रचना गरिएका जुनसुकै सामग्रीले बालबालिकाको मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राख्नै पर्छ । विद्यालयमा सर÷मिसले भनेका कुरा विद्यार्थीका लागि अकाट्य हुन्छ । उनीहरूले गल्ती नै गरेका भए पनि अरूले त्यस्ता कुरा सच्याउन खोज्दा उनीहरू त्यसलाई मान्न तयार हुँदैनन्् । हाम्रो ‘सर÷मिस’ ले भन्नु भएको भनेर बच्चाहरू जिद्दी कसिरहन्छन्् । लेखाइ र पढाइका कुरामा पनि उनीहरूको मनोविज्ञानले यसै भन्छ । फलानो किताबमा लेखेको÷पढेको यस्तै हुन्छ भनेर त्यहाँ पनि उनीहरू आफ्नो जिद्दी छोड््दैनन्् । तसर्थ भाषागत प्रस्तुति, भाषागत सरलता, शब्दको चयन, व्याकरणिक शुद्धता, पात्रको छनोट कुनै पनि कृति, अझ त्यसमा पनि बालोपयोगी कृतिका लागि अझ अपरिहार्य हुन्छ । त्यस अर्थमा यी चम्ल्याहा कृति पनि यस मामलामा केही हदसम्म चुकेकै देखिन्छन्् । तर, यदाकदा विषयवस्तुलाई लम्ब्याउने क्रममा कहीँ कतै अलिकति चिप्लिनु अस्वाभाविक भने होइन । यी कृतिमा सबल पक्षको जगजगी छ, कमजोर पक्ष त्यति सक्रिय हुन सकेका छैनन्् । विशेषतः यी चम्ल्याहा कृतिभित्र कथा र कथात्मक प्रस्तुतिमा कथाकार आपैmँले कथा नसुनाएर दोस्रो पात्र खडा गरी उनीहरूबाट कथा भनाइनु सर्वथा राम्रो पक्ष हो । साथीसाथीबिच कुराकानी अघि बढ््दै गएर साथीकै जिज्ञासामा अर्को साथीले कथा भनिदिँदा त्यो उनीहरूका लागि निकै रुचिकर हुने देखिन्छ । यो प्रयोग सर्जकले यसमा पर्याप्त रूपमा गरेका छन्् । तसर्थ, यी समग्र मूल्याङ््कनका आधारमा के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने – रत्नप्रसाद अनामणि श्रेष्ठको मानसिक कोखबाट वि. सं. २०७६ असारमा जन्मिएका यी चम्ल्याहा कृति साना बालबालिकाका लागि निकै उपयोगी हुनेछन्् । शुभ होस्् ।
आइत, भदौ १, २०७६ मा प्रकाशित